Ny tsy fahombiazan'ny AstraZeneca ve no fiandohan'ny loza COVID vaovao?
Home » Lahatsoratra farany farany » Naman'i eTurboNews » Ny tsy fahombiazan'ny AstraZeneca ve no fiandohan'ny loza COVID vaovao?
Naman'i eTurboNews • Tourism
Tsy afaka miverina ny fizahantany, indrindra fa tsy any Eropa sy Brezila ary ny tsenany loharano. COVID-19 dia miditra amin'ny onja fahatelo mampidi-doza kokoa noho ny tsy fahombiazan'ny vaksinin'ny AstraZeneca ary ny Sinovac sinoa kosa 50% ihany no mandaitra.
Miakatra be ny isa COVID, tsy mandeha ny vaksiny, feno ny hopitaly, fa ny vahoaka kosa namporisihin'ny filoham-pirenena handeha ho any amoron-dranomasina any Brezila
Eoropa miantehitra amin'ny vaksinin'ny Astra Zeneca dia mampiseho fa tsy nahomby ity vaksinina ity tamin'ny fivontosan'ny rà vitsivitsy taorian'ny nahazoana ilay vaksiny.
Etazonia dia toa ambony noho izao tontolo izao mifototra amin'ny kalitaon'ny vaksinina ampiasaina sy ny isa ampiharina
Ka ny vinantovaviko dia nandeha nanao vaksiny omaly. Voan'ny aretin'ny rà mandeha ho azy izy. Ny mpitsabo mpanampy dia nahafantatra tsara ny toe-pahasalamany ary nanoro hevitra ny tsy hahazo ilay vaksinin'ny AstraZeneca izy ary miandry ny iray amin'ireo hafa. Dia lasa izy.
Nambaran'i Danemark fa nisy maty sy aretina mafy taorian'ny fanaovana vaksinin'ny AstraZeneca 2, izay nahatonga ny fijerena bebe kokoa ny vaksininy tany Eropa. Nilaza ny maso misahana ny fanafody Danoa fa jerena raha mety hisy vokany ratsy io aretina io.
An'arivony no eny an-dalambe ao Hongria izay manohitra fameperana bebe kokoa
AstraZeneca dia nilaza fa ny vaksinin'izy ireo dia manome fiarovana kely kokoa amin'ny aretina malemy ateraky ny fiovana COVID-19 izay hita voalohany tany Afrika Atsimo, saingy manome fahombiazana mitovy amin'ireo karazany roa lehibe hafa.